IMfazwe yaseVietnam - uGrigadier General Robin Olds
URobin Olds - Ubomi bokuqala kunye noMsebenzi:
Wazalelwa ngo-Julayi 14, 1922 e-Honolulu, HI, uRobin Olds wayengunyana wa-ke uCaptain Robert Olds kunye nomkakhe uEloise. Omdala kunabo abane, abadala basebenzisa ubuninzi bakhe ebuntwaneni baseLinley Field eVirginia apho uyise wayemi njengomncedisi kuBrigadier General Billy Mitchell . Ngethuba apho wayedibanisa namagosa angundoqo kwi-US Army Air Service njenge- Major Carl Spaatz .
Ngomnyaka we-1925, i-Olds yahamba noyise kwi-court-court-martial court. Ugqoke ngokufana nomgangatho wenkonzo yomoya, wayebukele uyise efakazela kuMitchell. Kwiminyaka emihlanu kamva, i-Olds yabaleka okokuqala xa uyise wayihlasele.
Ukuthatha isigqibo malunga nomsebenzi wempi esemncinci, i-Olds yayiya kwiHolton High School apho yaba yimibala yebhola. Ukunciphisa uchungechunge lwee-scholarships zebhola, wakhetha ukuthatha unyaka wokufunda kwi-Millard School Preparatory School ngo-1939 ngaphambi kokufaka isicelo kwi-West Point. Ukufunda kokuqhambuka kweMfazwe Yehlabathi II ngelixa e-Millard, uzame ukuhamba esikolweni aze afune kwi-Royal Canadian Air Force. Le nto yayivinjiwe nguyise owamphoqa ukuba ahlale eMillard. Ukugqiba ikhosi yokufunda, i-Olds yamkelwe kwiWest Point kwaye yangena kwinkonzo ngoJulayi 1940. Inkwenkwezi yebhola eWest Point, yabizwa ngokuba yi-All-American ngo-1942 kwaye kamva yafakwa kwiHolo yeFlabathi yeFlabathi yeFlabathi.
URobin Olds - Ukufunda Ukuza:
Ukukhetha inkonzo kwi-Forces Air Air Force yase-US, i-Olds igqibe uqeqesho lwakhe lokuqala lokuhamba ngeenqwelo-moya ehlobo ka-1942 kwi-Spartan School of Aviation eTulsa, OK. Ukubuyela ngasentla, wadlula ngokuqeqesha phambili eStewart Field eNew York. Ukufumana amaphiko akhe kuGenerali Henry "Hap" uArnold , abadala baphumelela eWest Point ngoJuni 1, 1943 emva kokugqitywa kwekharityhulam yexesha elikhawulezayo lezemfundo.
Wathunywe njengommeli wesibini, wathola isabelo sokunika ingxelo kwi-West Coast ukuze uqeqeshe ukukhanya kwe-P-38 . Oku kwenziwa, i-Olds ithunyelwe kwi-479th Fighter Group yama-434th Fighter Squadron kunye nemiyalelo yaseBrithani.
URobin Olds - Ukulwa neYurophu:
Ukufika eBrithani ngoMeyi 1944, i-Olds squadron yafika ngokukhawuleza impi njengenxalenye ye-Allied air offensive ngaphambi kokuhlasela kwe-Normandy . Ukuqhayisa iinqwelo zakhe ze- Scat II , i-Olds basebenza ngokusondeleyo kunye nenkosi yakhe yokusebenza ukuze bafunde ngokugcinwa kweenqwelo. Wakhuthazwa ukuba abe ngumthetheli ngoJulayi 24, wafumana amanqaku akhe amabini okuqala abulala le nyanga elandelayo xa wahlawula i- Focke Wulf Fw 190s ngexesha lokuhlaselwa kwebhomu ku-Montmirail, eFransi. Ngomhla ka-Agasti 25, ngexesha lokuthunyelwa kwe-mission ukuya eWismar, eJamani, i-Olds yadutshulwa ezintathu i- Messerschmitt Bf 109s ukuze ibe yi-ace's first squadron. Phakathi koSeptemba, i-434 yaqala ukuguqula kwi -Mustang P-51 . Oku kwakudinga ukulungiswa kwinqanaba le-Olds njengoko enye ye-injini ye-Mustang yayisingatha ngokungafaniyo nombane we-injini.
Emva kokuhlawula i-Bf 109 phezu kweBerlin, abadala bagqiba uhambo lwakhe lokuqala lokulwa ngoNovemba kwaye banikezelwa iinyanga ezimbini eUnited States. Ukubuyela eYurophu ngoJanuwari 1945, waphakanyiswa ukuba abe yinyanga elandelayo.
Ngo-Matshi 25, wathola umyalelo we-434th. Ukunyuka ngokukhawuleza amanqaku akhe entwasahlobo, i-Olds yafumana ukubulawa kwakhe kokugqibela kwintlanzi ngo-Ephreli 7 xa wayichitha iBf 109 ngexesha le- B-24 Liberator ehlasela eLüneburg. Ekupheleni kwemfazwe eYurophu ngoMeyi, ama-Olds ayemi kuma-12 abulala kunye no-11.5 abhujiswe emhlabeni. Ukubuyela e-US, i-Olds yabelwa kwiWest Point ukuba isebenze njengomqeqeshi webhola yebhola kwi-Earl "Red" Blaik.
URobin Olds - Emva Kwemfazwe:
Ixesha lesidala eWest Point labonisa ukuba amagosa amaninzi asebekhulile ayengafuni ukuphakama ngokukhawuleza kwinqanaba lemfazwe. NgoFebruwari 1946, abadala bafumana ukutshintshela kwi-412th Fighter Group kwaye baqeqeshwa kwi-P-80 Shooting Star. Ngasala kuseleyo, wahamba njengenxalenye yeqela lokubonisa i-jet kunye noLieutenant Colonel John C.
"Pappy" Herbst. Ebonakala njengenkwenkwezi ephakama, i-Olds yanyulwa kwi-US Air Force-Royal Air Force yokutshintshela inkqubo ngo-1948. Ukuya eBrithani, wayala uNombolo 1 i-Squadron kwi-RAF iTangmere waza wanyuka i- Gloster Meteor . Ekupheleni kwesi sabelo ekupheleni konyaka we-1949, i-Olds yaba ligosa lo msebenzi kwi- F-86 yeSaber- exhobileyo ye-94th Fighter Squadron kwi-March Field eCalifornia.
I-Olds elandelayo yanikwa umyalelo we-71 Defense Fighter Squadron esekelwe kwi-Airport yase-Greater Pittsburgh. Wahlala kule nxaxheba kwimininzi yeMfazwe yaseKorea ngaphandle kokucela ngokuphindaphindiweyo umsebenzi wokulwa. Enyuka kakhulu i-USAF, nangona ukunyuswa koo-lieutenant colonel (1951) kunye no-colonel (1953), waphikisana nomhlalaphantsi kodwa wayethetha ngaye ngumhlobo wakhe uGeneral General Frederic H. Smith, Jr. Shifting kwi-Smith's Eastern Air Defense Command, Olds bebandezelekile kwiinkonzo zabasebenzi abaninzi baze bafumane isabelo kwi-86th Fighter-Interceptor Wing e-Landstuhl Air Base, eJamani ngo-1955. Ehlala ngaphandle kwamanye iminyaka emithathu, kamva wanyamekela iSikole soPhuhliso lweZixhobo kwi-Wheelus Air Base, eLibya.
I-Chief Deputy Deputy, i-Air Defense Division ePentagon ngo-1958, i-Olds ikhiqize njengoluhlu lwamaphepha eprofeto afuna ukuphucula uqeqesho lokulwa nomoya kunye nokuveliswa kweemimandla eziqhelekileyo. Emva kokuncedisa ekuveliseni inkxaso ye- SR-71 Blackbird program, i-Olds yayiya kwiKholeji yeNational War ngo-1962-1963. Emva kokugqiba iziqu, wayala iMpiko ye-Tactical Fighter i-81 kwi-RAF Bentwaters.
Ngeli xesha, wazisa phezu kweTuskegee Airman uColonel Daniel "uChappie" uJacob, Jr. ukuya eBrithani ukuba akhonze kubasebenzi bakhe. I-Olds yashiya ngo-81 ngo-1965 emva kokumisela iqela lokubonakalisa i-air ngaphandle kwegunya lokugunyazwa.
URobin Olds - iMfazwe yaseVietnam:
Emva kwenkonzo emfutshane eMzantsi Carolina, i-Olds yanikwa umyalelo we-8th Tactical Fighter Wing e-Ubon Royal Thai Air Force Base. Njengoko i-unit yakhe entsha ihamba ngeF-4 Phantom II , i-Olds yagqiba ikhosi yoqeqesho ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ihambe inxaxheba kwiMfazwe yaseVietnam . Utyunjwe ukuba enze ulwalamano kwi-TFW ye-8, i-Olds ngokukhawuleza yazibeka kwishedyuli yendiza njengomqhubi we-rookie xa efika eThailand. Wakhuthaza amadoda akhe ukuba amqeqeshe kakuhle ukuze abe yinkokeli efanelekileyo kubo. Kamva ngaloo nyaka, uJames wajoyina i-Olds kunye ne-8 ye-TFW kwaye ezimbini zaziwa phakathi kwamadoda ngokuthi "u-Blackman noRobin."
Ukwandisa ukukhathazeka malunga ne- F-105 Ukulahlekelwa kweendudumo kwiMiGs yaseNyakatho yeVietnam ngexesha lokuqhuma ibhomu, i-Olds yenzelwe u-Operation Bolo ngasekupheleni kowe-1966. Oku kubiza i-TFW F-4s ye-8 ukulinganisa imisebenzi ye-F-105 kumzamo wokuba iinqwelo eziza kulwa. Ukuphunyezwa ngoJanuwari 1967, ukusebenza kwabona iindiza ze-America phantsi kwe- MiG-21 yesixhenxe, kunye ne-Olds ibetha phantsi. Ukulahleka kwe-MiG kwakuyeyona nto ihlupheke kakhulu ngosuku olunye nguMntla Vietnam ngexesha lemfazwe. Impumelelo ephawulekayo, i-Operation Bolo iphumelele ngokugqithiseleyo ingongoma ye-MiG yintwasahlobo ka-1967. Emva kokubamba enye iMGG-21 ngo-Meyi 4, abadala badubula i- MiG-17 yesi-20 kwi-20 ukuphakamisa inani lakhe eli-16.
Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, abadala baqhubeka bekhokela amadoda akhe ekulwa. Kwimizamo yokukhulisa imilinganiselo kwi-TFW ye-8, waqala ukukhula umbhobho wombhobho owaziwayo. Ukukopishwa ngamadoda akhe, babhekisela kubo ngokuthi "ama-mustache". Ngelo xesha, wagwema ukudubula i-MiG yesihlanu njengoko wayetwayisiwe ukuba kufuneka abe yi-ace phezu kweVietnam, uya kukhululeka umyalelo aze eze ekhaya ukuqhuba iziganeko zokubhengezwa kwi-Air Force. Ngomhla ka-Agasti 11, i-Olds yenze isiteleka kwi-Paul Doumer Bridge eHanoi. Ngenxa yokusebenza kwakhe, wanikezelwa nguMoya oMkhosi we-Air Force.
URobin Olds - Umsebenzi wexesha elizayo:
Ukushiya i-TFW yesi-8 ngoSeptemba 1967, i-Olds yenziwe nguMlawuli weCadet kwi-US Air Force Academy. Ukhuthazwe ku-brigadier jikelele ngoJuni 1, 1968, wasebenza ukuze abuyisele isiqheno esikolweni emva kokuba i-scandal enkulu yokukhohlisa yayimnyama. NgoFebruwari 1971, i-Olds yaba ngumlawuli wokhuseleko lwe-aerospace kwi-Ofisi yoMhloli-Jikelele. Ukuwa kwalo, wabuyiswa kwi-Asia-mpuma yeAsia ukuxela ukulungiswa kokulwa kwamaqumrhu ase-USAF kuloo ndawo. Ngethuba apho, watyelela iisiseko waza wahamba ngeendlela ezininzi ezingagunyazisiweyo zokulwa. Ukubuyela kwi-US, i-Olds yabhala ingxelo ebangelisayo apho wayinikela ngokuxhalabisa ngokukrakra ngokubhekiselele koqeqesho lokulwa emoyeni-moya. Ngomnyaka olandelayo, ukwesaba kwakhe kuye kwangqina xa ii-USAF zenze i-1: 1 yokubulala-loss ratio ngexesha le-Operation Linebacker.
Ngomgudu wokunceda imeko, i-Olds inikezela ukuthatha ukunciphisa i-rank to colonel ukuze ibuyele eVietnam. Xa lo mnikelo unqatshelwe, wakhetha ukushiya inkonzo ngoJuni 1, 1973. Ukuthatha umhlala-phantsi kwi-Steamboat Springs, CO, wayesebenzayo kwimicimbi yoluntu. Ebekwe kwiHolo leSizwe loLwazi loLwazi loLwazi ngo-2001, abadala bafa kamva ngoJuni 14, 2007. Umlotha omdala waxoxwa kwi-US Air Force Academy.
URobin Olds: i-Biography
Abaqhubi bee-Ace: Major Robin Olds kwiMfazwe Yehlabathi II
US Air Force: I-Legendary Fighter Pilot uRobin Olds Dies
Oonyana bakaEleanor ka-Aquitaine Ngo-Eleanor, uMthekazi weCastile
Funda indlela yokuhlala nge-Longboard kwi-7 elula
Isikhokelo kwixesha elithi "Ifomu eNciphise" kwi-Econometrics
Ukubandakanya eMexico kwiMfazwe Yehlabathi II
Iimpawu malunga neCandelo loLwazi kwi-Feudal Japan
Indlela yokufumana iSandy eGoli